Kukura: Vaka Iyo Yekupedzisira Internet Kushambadzira Dhibhodhi | Martech Zone
Isu tiri mafeni makuru ezviratidzo zvekuita zvinoonekwa. Parizvino, isu tinogadzira mishumo yemwedzi nemwedzi kune vatengi vedu uye, mukati mehofisi medu, isu tine hombe skrini inoratidzira chaiyo-nguva dhibhodhi yevatengi vedu vese internet kushambadzira makiyi ekuita zviratidzo. Chave chiri chinhu chakakura - kugara uchitizivisa kuti ndevapi vatengi vari kuwana mhedzisiro yepamusoro uye ndeapi vane mukana wekuvandudza.
Tichiri kushandisa izvozvi Geckoboard, pane zvikwanisiro zvakati wandei zvatiri kumhanyira mazviri patinoenderera mberi nekuchenesa dashboard, kuigadzirisa, uye kuwedzera vatengi. Geckoboard ine sarudzo hombe yemawadhi akareruka ekuwedzera uye kuronga padheshibhodhi. Nekudaro, ivo havana kunyanya kugadziriswa - zvine mashoma, akaomarara-makodhi sarudzo.
kura inopa yakazara yakagadzirirwa dashibhodhi ine akati wandei mabhenefiti:
Sizing - Imwe yeiyo majeti anogona kuyerwa kupfuura zviyero zviri nyore.
Kufukidzira - Panzvimbo pekuzvimiririra sosi pane yega yega widget, iwe unogona kufukidza akawanda data masosi. Saka fungidzira shanduko uye mari yakafukidzwa pamusoro pewebsite yakabhadharwa traffic!
Data Sources - Kana akaiswa zvakaunganidzwa zvisina kukwana, iwe unogona zvakare kuwedzera ako ega masosi sosi nekubatanidza kune chero epamhepo dhata sosi uye kuchata zvinobuda uchishandisa Kukura kwemajeti.
Tiri kupa kufunga kwakakomba kukudziridza tsika internet kushambadzira madhibhodhi kune umwe neumwe wevatengi vedu uye tobva taita kuregedza kwedu zvachose. Kunyangwe zvaizoda rimwe basa kuti isu tizadzise shanduko, panogona kunge paine mari yekuchengetedza zvakakwana mukutamisa vatengi vedu nhungamiro iyi. Uye hapana chikonzero chekumhan'arira - ikozvino isu tichava neyese data mune chaiyo-nguva.
Mukati mehurukuro yedu nemumiriri weGrow, vanogona kunge vaine zviyeuchidzo zvinouya munguva pfupi papuratifomu. Izvo zvingave zvisina-brainer nekuchinja kwedu. Fungidzira uchiudzwa pane spike mumugwagwa kana kudonhedza mumigwagwa!
kura ndiyo yakapusa nzira yekuwana yako data uye kuiona mune chaiyo-nguva mamaki. Kana bhizinesi kuita kuyerwa kunogona kuvandudzwa. Uye zvikwata zvinoziva zvibodzwa, zvinotamba kuti zvikunde!
Kubatanidzwa kwazvino kunosanganisira Act-on, Amazon Redshift, Amazon S3, Kuongorora, Asana, Bhokisi, CSV, Custom Rest API, Chiteshi Advisor, Dhatabhesi Dhivha, Dropbox, Facebook, Facebook Ads, Zvinyorwa zvitsva, FTP / SFTP Faira kuwana, Github, Google Adwords , Google Analytics, Google Spreadsheets, Kukohwa, HP Vertica, Infusionsoft, Insidesales.com, Instagram, Magento, Mailchimp, Marketo, Mixpanel, MongoDB, Mysql, Netsuite, NuoDB, Oracle, PostgreSQL, Quickbooks Online, Shopify, Shipstation, Salesforce, SQL sevha, Sugar CRM, Kubatana, Twitter, Vertica Database, Xero, Youtube, Zoho Mabhuku, Zoho CRM, Amazon mutengesi wepakati, Amazon S3, Hubspot, Dzokororo, uye Rondedzera IQ. Microsoft Dynamics CRM iri kuuya nekukurumidza.
Tags: Chiito-OnAmazon RedShiftamazon s3Amazon mutengesi wepakatiKuongororaAsanabhokisiChiteshi ChipangamazanoCSVTsika Zororo APIdashboarddashboard appdashboard chikuvaDhatabhesi InobatanidzaDropboxFacebookfacebook adsMabhuku matsvaFTP / SFTP Faira kuwanaGitHubgoogle adwordsgoogle analyticsGoogle SpreadsheetskukuragohwoHP VerticahubspotInfusionsofthwacha.netInstagramkey performance zviratidzoMagentomailchimpkushambadzira dashboardkushambadzira dashboard appmarketoMixpanelMongoDBmysqlnetsuiteNuoDBpangatauraPostgreSQLQuickbook OnlineDzokororoRondedzera IQsalesforcechiteshi chezvikepeshopifySQL ServerShuwa CRMKushandira pamweTwitterVertica DhatabhesiXeroYouTubeZoho MabhukuZoho CRM
Sep 13, 2016 na12:25 PM
Wow! Ndatenda nechinyorwa chikuru. Tine akati wandei anotyisa makambani ekushambadzira anoda Kukura. Tinoda kuratidza chero munhu anofarira anokurumidza demo. http://www.grow.com/bi-demo/